Dastuurka KMG ah oo isku diraya dowladda Dhexe iyo D.Goboleedyada! | Baydhabo Online
Dastuurka KMG ah oo isku diraya dowladda Dhexe iyo D.Goboleedyada!
Muranka u dhaxeeya Maamulka Hirshabeelle oo ka mid ah dowlad Goboleedyada Federaalka ku jira iyo dowladda dhexe ayaa waxaa uu hadda yahay mid ka mid ah caqabadaha dhanka Dastuurka ah ee ay wajaheyso Dowladda cusub.
Maamullada Somaliland iyo Puntland ayaa horay heshiisyo caalami ah oo khilaafsan Dastuurka KMG ah,waxaana ay qasab ka dhigtay in Madaxweynaha Federaalka Maxamed C/llahi Farmaajo oo booqasho ku tago Imaaraadka inkasta oo aan la shaacin wixii sida saxda ah looga wada hadlay.
Todobaadkii hore Dowladda Federaalka iyo Ganacsatada Qaadka kala soo dega Muqdisho iyo Wasaaradda Maaliyadda ayaa isku qabtay Canshuur kordhin ay sameysay Wasaaradda taas oo kiilada Qaadka ah lagu kordhiyay 10,000 oo Sh.Somali ah.
Ganacsatada Qaadka oo arrintaas ka gadooday ayaa waxaa ay go’aansadeen in aysan Qaad ka soo dejin Muqdisho,waxaana ay Khamiistii ka dejiyeen Garoonka Diyaaradaha Magaalada Jowhar ee xarunta Hirshabeelle.
Maamulka Hirshabeelle ayaa arrintaas soo dhaweeyay waxaana Warqad ka soo baxday Wasiirka Waraafinta Hishabeelle lagu sheegay in Maamulka Hirshabeelle uu soo dhaweynayo Ganacsatada u wareegtay Garoonka Diyaaradaha Jowhar.
Dowladda Federaalka ah ayaa si hoose u maareysay waxaana Qaadkii ka soo degay Maalintii shalay ahayd Garoonka Aadan Cadde.
Arrintaas waxaa ka carooday madaxweynaha Maamulka Hirshabeelle Cali C/llahi Cosoble waxaana uu sheegay in uu Taleefan kula hadlay Ra’isalwasaare Xasan Cali Kheyre oo uu arrintan ka weydiiyay waxa uu ka ogyahay.
Mr Cosoble ayaa sheegay in Ra’isalwasaaraha uu ugu jawaabay in uusan waxba kala socon,waxaana uu Cosoble intaas ku daray in xubno hoose oo dowladda ah arrintaas ka shaqeeyeen taas oo uu sheegay in uu u arko cuno qabateyn la saaray Maamulka Hirshabeelle oo ay dowladda dhexe saartay.
Madaxweyne Cosoble ayaa ku hanjabay in ay sharciga la tiigsan doonaan xafiisyada dowladda ee ka shaqeeyay in Qaadkii Khamiistii ka degay Jowhar uu dib ugu laabto Muqdisho.
Dastuurka KMG ah ee la ansixiyay 1dii August 2012kii ayaa faraya in Dowladda dhexe ay mas’uul ka tahay arrimaha Siyaasadda lacagta,Dibadda,Difaaca Qaranka iyo Socdaalka iyo Insiyadaha.
Awood-qaybsiga siyaasadeed iyo dhaqaale waxaa ka wada xaajoon doona Xukuumadda Federaalka
iyo Dawladaha ka mid noqonaya Dawladda Federaalka Soomaaliya marka laga reebo: A) Arrimaha
Dibadda; B) Difaaca Qaranka; C)Jinsiyadda iyo Socdaalka iyo D) Siyaasadda Lacagta, oo ay awooddeeda
iyo mas’uuliyaddeeda yeelaneyso Xukuumadda Federaalka.
Qodobka ayaa inta ka soo harta ku sheegay in ay ka heshiin doonaan dowladda dhexe iyo Dowladgoboleedyada,waxaase muuqata in aan wax xal ah laga gaarin arrinkaas,maalimkii la qoray kaddibna aan dib loo eegin.
Dal daloollada ka buuxa dastuurka ee Awoodaha aan kala caddeyn waxaa ay walaac badan ku heysaa Shacabka Soomaaliyeed ee aan markii horeba codkooda lagu qaadan Federaalka,haddana ay u muuqato qatarta uu ku hayo Soomaaliya.